Hanami - Omenala ndị Japan You Ga-adịrịrị Ndụ Otu Ndụ | Njem zuru oke
You maara ihe pụtara Hanami? Anyị anaghị ajụ maka ihe okwu ahụ pụtara n'onwe ya, kama banyere ihe ọ bụla ọ na-ese onyinyo ya. Ọfọn, tupu i chee echiche, ka m gwa gị na anyị ga-aga Japan ịghọta ntakịrị ihe gbasara ọdịnala a mara mma nke anakọtara n'otu okwu.
Anyị nwere ebe ahụ na ihe kpatara ya bụ okooko osisi. Ya mere, osisi cherry ngwa ngwa cheta. Ee, okooko osisi okooko osisi bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa, a makwaara dị ka Sakura mgbe osisi cherị na-ama ifuru. Ọfọn, ha bụ akụkụ nke Hanami, ọdịnala nke taa anyị ga-ekpughe ihe nzuzo ya niile.
1 Gịnị bụ hanami
2 Ebee ka ọdịnala dị ka nke a si abịa?
3 Kedu mgbe anyị nwere ike ịhụ ifuru a
4 Ebe ọdịnala iji mee Hanami
Gịnị bụ hanami
Anyị nwere ike ịkọwa ya dị ka a ọdịnala japan. N'ezie, ọ bụ otu n'ime ihe ndị a hụrụ n'anya ma soro. Ebe ọ bụ na ọ na-atọ ụtọ ma hụ otú osisi cherry na-eto. Nke ahụ bụ, ọ bụ ụdị emume nke onye ọ bụla na-aga ebe ụfọdụ ka ọ mara mma ya. Mma a dabere n'eziokwu na okooko osisi cherry apụtawo ìhè ma jiri uwe na-acha odo odo kpuchie obodo ahụ dum. N'ezie, ọ bụ ezigbo ọmarịcha agba, n'okporo ámá na ogige ntụrụndụ na ụtọ dị oke ụtọ. Yabụ ọ bụrụla oge dị ukwuu.
Ebee ka ọdịnala dị ka nke a si abịa?
A ghaghi ikwu na o sitere na otutu afo. Ebe ọ bụ na oge okooko osisi ahụ na-eto n’elu osisi, oge ahụ ga-aka akara mmalite oge opupu ihe ubi dịka onye ọ bụla maara. Ma ọ bụghị naanị nke ahụ kamakwa ọ bụ ihe na-egosi na osikapa akuku oge. Na mgbakwunye na igosi oge a kapịrị ọnụ n'ime otu afọ, a ghaghị ikwu na ụdị osisi ndị a dị ka ihe dị nsọ.
Ebe ọ bụ na ha kwenyere na chi dị n'ime ha. Ya mere, mgbe mbido owuwe ihe ubi rutere ma okooko osisi, a sụgharịrị ya na chi dị iche iche na-aivea ntị iji nyere owuwe ihe ubi ahụ ka ọ dị mma. Ya mere, e kwuru na akụkọ ihe mere eme nke okpukpe bụ ntọala mbụ nke ọdịnala hanami. Mbata nke oge opupu ihe ubi kamakwa ngbanwe nke chi di iche iche di n'uwa, n'uzo enyemaka.
Ma ọ bụ eziokwu na nta nke nta ọ kwụsịrị okpukpe isi na e nwekwara ọtụtụ ndị na-metụtara ndị samurai. Nke ahụ bụ, ihe nnọchianya nke ịnwụ anwụ mgbe ọ ka nọ n'oge ndụ. Ihe ọzọ bụ na e nwere akụkọ mgbe ochie na-ekwu na mbụ okooko osisi ndị ahụ dị ọcha, mana na obere nke nta ha jiri ọbara ndị dike wee were pink hue anyị maara.
Kedu mgbe anyị nwere ike ịhụ ifuru a
Ọ bụ kwuru na ama ke utịt February mbụ okooko osisi na-amalite na-epu ome. Nke nta nke nta na ruo mgbe Mee ga-enwe ọganihu na mpaghara ọ bụla nke mba ahụ. Ebe ọ bụ na ha ga-ebu ụzọ pụta na mpaghara ndịda na obere obere ha ga-agbago n’ebe ugwu, nke ga-abụ onye ikpeazụ ga-ahụ ihe ngosi ahụ. Ọ bụ ezie na mpaghara nwere scoop mgbe niile bụ agwaetiti okinawa, ebe ọ bụ na mmalite nke Machị ị ga-enweworị okooko osisi cherry. N'adịghị ka Hokkaido, nke ga-abụ ihe mgbochi ọzọ, ebe ọ bụ na mmalite nke May ha agaghị eme emume a. Mgbe ụfọdụ ọ na-eju anyị anya na enwere ike ịhụ ya ifuru ọbụlagodi na ngwụcha ọnwa Jenụwarị, ọ bụ ezie na ọ naghị adịkarị.
Ebe ọdịnala iji mee Hanami
Ọ bụ ezie na osisi ndị a abanyela ọtụtụ akụkụ nke mba ahụ, enwere ebe ndị ọzọ na-eleta. Offọdụ n'ime ha bụ Ueno Park dị na Tokyo ma ọ bụ na Kyoto na Heian Shrine ma ọ bụ Kamogawa. Mgbe nọ Osaka, isi ihe dị na Castle Park na Nara, nakwa na ogige nke na-aza aha ya. N'aka nke ọzọ, na Hokkaido anyị nwere Goryokaku Castle Park na Okinawa, bụ Castle Nakijin.
N'ezie, taa nnọkọ ahụ na-akpọkọta mmadụ niile n'ogige ntụrụndụ dị iche iche ma ọ bụ ugwu na ebe ị nwere ike ịchọta osisi cherry, nke dị n'akụkụ ọ bụla. Karịa ọdịnala, ọ ghọọla nnukwu nnọkọ ebe ha na-ezukọkarị iri nri na ị drinkụ ihe ruo mgbe anyanwụ dara. Yabụ ugbu a ọ na-eme ememme karịa iche echiche. N'agbanyeghị nke ahụ, onye ọ bụla na-eme ememe na ikuku pụrụ iche gbara ya gburugburu, nke kpuchie ya na uwe mara mma ma jupụta na ọdịnala yana akụkọ ifo. Ruo ogologo oge ọ gafere, osisi ndị a ka dị nsọ.
Yabụ, ị ga-aga otu n'ime ebe ndị ahụ, dobe ohere gị iji nwee ike ịnọdụ ala n'ogige ntụrụndụ, ịnụ ụtọ ehihie ma ọ bụ ụbọchị niile. Ahụmahụ ahụ pụrụ iche ma zuru ike. Oge ụfọdụ ị nwere ike ịpụ n’obodo ahụ wee nwekwuo obi ụtọ ma ọ bụ n'akụkụ osimiri. N ’agbanyeghị ya, ihe bụ isi bụ ibi ya ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Hanami